Ressi Medri (Eritrea), 25 Mar 2014 (Alldhooftinle.com)
Gabadh Bac Carrabka Iskaga Xidhay Si Ay U Gaajooto Oo U Qurux Badato.
Gabadh 18 jir ah oo la yiraahdo Meyer Nava una dhalatay dalka Venezuela ayaa carrabka bac iskaga toshay si aanay wax u cunin. Gabadhan oo doonaysa inay noqoto gabadha ugu quruxda badan dalkaas ayaa sheegtay in markastoo ay damacdo inay wax cunto carrabku damqado sidaa darteedna ay cuntada u joojiso.
Gabadhan oo ka soo jeeda qoys faqiira ah ayaa sheegtay in qoyskeedu ka bixiyeen 7000 doolar, oo ay ku gashay qaliin lagaga sameeyey sanka iyo meelo kale oo jidhkeeda ka mid ah, sidaa darteedna aanay dooneyn inay khasaariso qoyskeeda.
"Aniga iyo guusha waxaa noo dhexeeya sida aan u ilaaliyo miisaankayga" ayay tiri iyadoo raacisay inay cabitaan keliya ku nooshahay oo ay calalis kala dhaqaaqeen. "Waxaan cuntada cuni doonaa maalinta aan ku guuleysto tartanka quruxda ee Venezuela, layna bixiyo "Miss Venesuela" ayay tiri Meyer.
Gabadhan oo ku nool xaafada isku raranka ah ee Santa Cruz oo ka mid ah caasimadda Caracas, waxaa tartanka quruxda Venezuela kula tarmaya kumanaan gabdhood oo reer Venezuela ah.